Sirdoonka Milliteriga Kenya oo ku lug lahaa gelbinta Duullimaadkii Tooska ee Muqdisho iyo Nairobi. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Sirdoonka Milliteriga Kenya oo ku lug lahaa gelbinta Duullimaadkii Tooska ee Muqdisho iyo Nairobi.
Wargeyska The Star ayaa qoray in Unug ka tirsan Sirdoonka Milliteriga Kenya ku lug lahaayeen dhamaan maaraynta Hawlaha Duullimaadkii u horreeyey ee maalintii Arbacadda ee la soo dhaafay isaga kala gooshay Muqdisho iyo Nairobi iyo La-socoshadda Rakaabkii saarnaa Diyaaradaasi.
Ilo la hadlay Wargeyskaasi ayaa sheegay in Saraakiisha Sirdoonka Milliteriga Kenya ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyadda dhulka, gaar ahaan Shidaal-siinta Siyaaradaha ee Garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho, iyadoo aan dadka loo sheegin Dhaqdhaqaaqaasi.
Ka-hor inta aan dib loo bilaabin Duullimaadka Tooska, Koox isku dhaf ah oo ka socday Hay’addaha Ammaanka Kenya ayaa socdaal ku yimid Muqdisho, si ay u qiimeeyaan ammaanka gudaha iyo duleedka Garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho.
Duullimaadkaasi oo ay la socdeen 49 qof oo rakaab ah ayaa ka degay Garoonka Caalamiga ee Jomo Kenyatta ee magaalladda Nairobi.
Duullimaadyada ka ambabaxa Muqdisho waxay horey 10-kii sanno ee la soo dhaafay ka degi jireen Garoonka Diyaaradaha ee Degmadda Wajeer, halkaasi oo Rakaabka iyo Shandahooda lagu baari jirey, ka hor inta aysan u si idhoofin Garoonka Jomo Kenyatta ee Nairobi.
Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta ayaa horey u sheegay dadka Reer Kenya in la qaadayo Tallaabo kasta oo lagu adkeynayo Ammaanka Rakaabka la socda Diyaaradaha isaga kala goosha Somalia iyo Kenya.
Milliteriga Kanada ee qeybta ka ah Hawlgalka La-dagaalanka Daacish oo xilliga loo kordhiyey.
(SAWIRO): Dareewaladda Gaadiidka Xamuulka ee Dekedda Muqdisho oo cabasho ka muujinaya Tareelooyinka.